Cnaps: fiofanana fiahiana sosialy tany Vatomandry - ewa.mg
News - Cnaps: fiofanana fiahiana sosialy tany Vatomandry
Natao tany Vatomandry, ny herinandro lasa teo, ny fampiofanana ho an’ny fiahiana sosialy tany amin’ny distrika Vatomandry. Niandraikitra azy ny sampandraharaha fahasalamana sy sosialy (Sass) ao amin’ny Tahirim-pirenena misahana ny fiahiana sosialy (Cnaps), notarihin’ny mpandrindra ny asa, Rakotomalala Yvan, nilazany fa zava-dehibe ny fananana fiahiana sosialy. Nohatevenina ny efa fantatry ny rehetra, toy ny fisotroan-dronono, ny dingana arahina rehefa hanao fangatahana, ny fanampiana samihafa omen’ny Cnaps ny fianakaviana sy ny mpiasa raha sendra tra-doza am-perinasa, sns. Nohazavaina koa ny atao hoe Fahasalamana sy fiarovana amin’ny asa (SST).
Niisa 43 ny mpiofana, nahitana mpampiasa sy mpiasa, avy amin’ny sehatra samihafa, nandritra ny telo andro. Nanokatra ny fotoana ny lefitry ny lehiben’ny distrika Vatomandry, Ramanampamonjy Fanomezantsoa, niaraka tamin’ny tompon’andraikitra samihafa. Nomena mari-pankasitrahana izy 43 mianadahy taorian’ny fiofanana.
L’article Cnaps: fiofanana fiahiana sosialy tany Vatomandry a été récupéré chez Newsmada.
Araka ny filazana hita tao amin’ny tambajotran-tserasera, nivoaka omaly talata, fantatra fa tsy navelan’ny tomponandraikitra ao amin’ny Fosa Jr, hanao «visa», hamonjy ny fampivondronana ireo mpilalaon’ny Barea, any Paris, i Baggio. Voalazan’ny fampitam-baovao fa anton’izany, ny fisian’ireo ambin-dalao hatrehin’ny Fosa Jr, eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara sy ny amboaran’i Madagasikara, samy mbola hatrehin’ny ekipan’i Boeny avokoa, indrindra fa ny famaranana ny «Telma coupe», ny alahady 2 jona, ho avy izao.Tsiahivina fa tokony hanainga, amin’ity herinandro ity, i Baggio sy i Leda satria hanomboka ny 31 mey ho avy izao, any Paris, izany fampivondronanana eo anivon’ny Barea de Madagascar izany. Raha ny fandaharam-potoana, hisy lalao fihantsiana hikatrohan’ny Barea amin’i Luxembourg, ny alahady 2 jona ho avy izao.Ankoatra izay, anisan’ireo mpanohana ny Barea koa ny banky BNI Madagascar, mandritra ity taona 2019 ity. Hisy lalao ho an’ireo mpitsidika ny “Foire internationale de Madagascar”, hatao eny Tanjombato manomboka ny alakamisy ho avy izao, eo amin’ny “stand” BNI Madagascar. TompondakaL’article Barea de Madagascar: tsy avelan’ny Fosa Jr mandeha i Baggio a été récupéré chez Newsmada.
Base Toliara: hanomboka amin’ny 2021 ny fitrandrahana fasimainty
Manaraka ny bokin’andraikiny ny orinasa mitrandraka fasimainty Base Toliara. Nambaran’ny tale jeneraliny, Ramahefarivo Jean Bruno, fa misy ny fandaharam-potoana nalahatra hanatanterahana ny drafitrasa. Hanomboka amin’ny taona 2020 ny fananganana ny fotodrafitrasa ilaina, toy ny ozinina sy ny tranon’ny mpiasa, ny lalana, ny fotodrafitrasa eny amin’ny seranan-tsambo, sns, vitaina mandritra ny roa taona. Aorian’izay, hanomboka amin’ny faran’ny taona 2021 ny asa fitrandrahana fasimainty, haondrana any ivelany.Mialoha ireo, maromaro ny asa fanomanana hatao amin’ity taona 2019 ity. Anisan’izany ny fanadihadiana ny asa hatao, ny firesahana tsy tapaka amin’ny mponina any ifotony. Eo koa ny fikarakarana ny fifanarahana amin’ny antso tolobidy ho an’ny tolotr’asa samihafa, toy ny fanamboaran-dalana, ny fanorenan-trano, ny fotodrafitrasa samihafa, ny famatsiana sakafo, ny fikojakojana, sns.Tsy hitanay ny tsy ifanarahanaMikasika ny fanehoan-kevitra samihafa tato ho ato, mikasika ity tetikasan’ny Base Toliara ity, nilaza ny tale jeneraly fa tsy hitan’izy ireo ny tokony hisian’ny tsy fifanarahana eo aminy sy ny fanjakana. Manana ny taratasy fahazoan-dalana ara-dalàna ny Base Toliara ary ao anatin’izany ny dingana fitrandrahana. Amin’izy ireo, tsy nisy ny filazan’ny fanjakana, nandritra ny fitsidihana nataon’ny minisitera tany Toliara, fa hajanona ny tetikasa. Hojeren’ity orinasa ity kosa anefa ny fanampiny amin’ny lafiny sosialy. Nomarihiny fa tsy andraikitry ny orinasa tsy miankina ny misahana ny lafiny fampandrosoana ankapobeny na antsipiriany amin’ny fampandrosoana, saingy manana anjara kosa izy ireo amin’ny fanampiana sy fanohanana ny fiharian’ny mponina eny ifotony sy ny sosialy. Anisan’izany ny hananganana hopitaly any amin’ny kaominina Ankilimanilike, satria lavitra, 52 km miala an’i Toliara.Hanomboka amin’ny volana jona koa ny famindrana ireo razana, ka hafindra any akaikin’ny tanànan’ny mponina, ary arahina daholo ny fomban-drazana rehetra.Tsy mikitika ny alan’i MikeaMikasika ny resabe amin’ny alan’i Mikea, notsorin’ny DG, Ramahefarivo Jean Bruno, fa tsy manana fahazoan-dalana hitrandraka any amin’ity ala arovana ity ny Base Toliara. Tsy mikitika azy izahay, tsy manana taratasy amin’izany, sady vakoka iraisam-pirenena ny alan’i Mikea.Manana drafitrasa matipaiky ity orinasa ity hamerenana amin’ny laoniny ny toerana hitrandrahany fasimainty. Misy ny fambolen-kazo ary ho tsara kokoa noho ny hita amin’izao fotoana aza, satria mirongatra ny fanimbana ala sy ny fanaovana saribao any an-toerana, ankehitriny.Njaka Andriantefiarinesy Tombanana 806.000 t isan-taona ny fasimainty hotrandrahin’ny Base Toliara, 54.000 t ny zircon ary 8.000 t ny rutile. Ampiasaina amin’ny zavatra maro ireo akora ireo, toy ny alliage en titane, ny amin’ny fanamboarana loko, plastika, taratasy, fanafody na kojakoja amin’ny vatana, sns.Maharitra 33 taona ny fitrandrahana ary manodidina ny 560 tapitrisa dolara ny fampiasam-bola.L’article Base Toliara: hanomboka amin’ny 2021 ny fitrandrahana fasimainty a été récupéré chez Newsmada.
Faribolana Sandratra: hitondra ny “Poezia Mozikaly” ny Raingy
Mitohy hatrany ny ezaky ny Faribolana Sandratra amin’ny fanomezan-kasina sy lanja ny tontolon’ny asa soratra, indrindra fa ny tononkalo. Iray amin’ireny ny “Raingy” hanolotra ny “Poezia Mozikaly”.“Poezia Mozikaly”, io ny anarana nampitondraina ny « Raingy » andiany fahatelo. Antsa voarindra ho tsangantononkalo ampiarahina amin’ny hira voalamina fa tsy toy ny mahazatra hatramin’izay. Hotanterahina ny 22 jona izao, manomboka amin’ny 3 ora hariva, etsy amin’ny CGM Analakely. Hetsika fanao isaky ny roa taona iarahana amin’ireo tovolahy poeta enina mirahalahy, ahitana an-dry Mina Ilarion, Mero Kosiky, Andriniela, Zazangaly, Eluart Andriatovonirina ary i Lefitra Aloky ny Ara, avy ao amin’ny Faribolana Sandratra.Hetsika tafiditra ao anatin’ny fankalazana ny faha-30 taon’ity fikambanana ity sy ny fankalazana ny Iray volan’ny Teny malagasy.Ny Raingy, karazana fitaovana fampiasan’ny mpianala mba hanome afo. Hakasokasoka amin’ilay hazo lafika ny tsato-kazo. Asiana ravin-javatra na fako eo ampototr’ilay hazo, ka rehefa mahamay ireo hazo mifampikasoka, manome afo. « Tahaka izany no foto-pisainana nentinay hanatsarana ny tontolon’ny literatiora », hoy ny fanazavan’i Mina Ilarion.Miavaka ny fampisehoana amin’ity indray mitoraka ity, noho ireo boky telo indray mivoaka (ny andiany voalohany sy ny faharoa, indrindra ity andiany farany ity). Tsy misy vidim-pidirana fa maimaimpoana ny seho.NarilalaL’article Faribolana Sandratra: hitondra ny “Poezia Mozikaly” ny Raingy a été récupéré chez Newsmada.
Zazalahy kely iray nilalao tsy lavitra alan’akondro no nahita ireto taolam-paty roa gony, afak’omaly, tao Agnalamba Distrikan’i Vangaindrano. Araka ny tati-baovao voaray, dia nametrahan’ny/ireo mpangalatra taolam-paty teo ambonin’ireo gony. Nihevitra ilay zaza, fa akondro ny ao anaty gony, ka rehefa nosavainy dia taolam-paty taolan-dava marobe no tao. Nampandre haingana ny olona teo an-tanàna sady nitantara ny zavatra hitany izy. Taorian’izay no niantso ny mpitandro filaminana ny Sefo Fokontany. Eric ManitrisaL’article Vangaindrano : Taolam-paty 2 gony, sarona a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Niray feo ny tompon’andraikitra samihafa any an-toerana, fa “doran’ireto olona ireto ny ala na ny baiboho, ary andatsahana katsaka, na ambolena mangahazo, na voanjo, na lojo avy eo. Matetika amin’ny alina no hanaovan’izy ireo izany.Manana Birao ifoton’ny fananan-tany (Bif) ny kaominina Andranofasika. Nilaza ny tompon’andraikitra iray ao, Moravelo André, fa « tsy manana taratasin-tany ara-dalàna ny 60%-n’ny tany any an-toerana. Ny 20% ihany no manana titra na kadasitra ary karan-tany ny 20% ». Tsy mahagaga raha mirongatra ny fampiasana ny tanim-panjakana sy ny faritra arovana satria mihamaro ny mpanajary.Manararaotra ny mpandraharahaNilaza Namindrantsoa, fa misy mpandraharaha manangona ny vokatr’izy ireo eo amoron’ny lalam-pirenena fahefatra (RN 4). Misy amin’izy ireo avy any Antananarivo, manangona ny katsaka, ary avy any Mahajanga ny mpanangona lojo, mangahazo, voanjo, sns. Nambaran’ny ben’ny Tanàna Marosakoa, Gilbert, fa “misy amin’ireo mpandraharaha mahavita manome vola 2 tapitrisa ariary aloa mialoha ho entina miasa. Eo koa ny mpanangona saribao, mamatsy azy ireo mialoha ny gony, ka izy ireo ihany no mametra ny vidiny andraisany ny vokatra avy eo. Misy koa tompon’andraikitra ambony, toy ny mpitsara, manamboninahitra ambony, sns, manana velaran-tany midadasika, indrindra amin’ny toerana baiboho, manodidina ny alan’Ankarafantsika. Nambaran’ny talen’ny parka, Jaotera, fa “manararaotra ny fahantrana sy ny faharefon’ireo olona ireo, ny sokajin’olona samihafa, toy ny mpandraharaha sy ny mpampiasa vola. Soso-kevitro, ny handraisan’anjara ireo sehatra sy rafitra samihafa hiarahana mamantatra ny olana ary miara-mijery ny vahaolana. Voakasik’izany ny ao amin’ny minisiteran’ny Atitany, ny Fanjariana ny tany, ny Filaminam-bahoaka, ny Mponina, ny Tontolo iainana sy ny ala, sns … raha tsy izany, ahina ho ringana tanteraka ny ala an’ Ankarafantsika ato anatin’ny dimy taona”. Tarehimarika vitsivitsy:Distrika roa, Ambatoboeny sy Marovoay, no mamaritra ny valan-javaboaharin’Ankaranfantsika, ahitana kaominina miisa 13. Mirefy 93.635 ha, ary arahin’ny Komity ifotony ao amin’ny parka (CLP) ny 75.100 ha.Ny taona 2017, nahatratra 67 ha ny velaran’ala potika; 2.476 ny isan’ny foto-kazo notapahana tsy ara-dalàna; miisa 218 ny goni-tsaribao tsy ara-dalàna tratra,…Mitentina 95 tapitrisa Ar ny vola nampidirin’ny parka ny taona 2017; 92 tapitrisa Ar ny 2018 ary 124 tapitrisa Ar amin’izao jona 2019 izao.Anisan’ny zva-bitan’ny Parka ny fampidirana rano fisotro madio ho an’ny mponina, ny fambolen-kazo, ny fiarovana ny nofon-tany tamin’ny alalan’ny fambolena volotsangana, sns.Nanatontosa: Njaka AndriantefiarinesyL’article Ambolena katsaka, lojo, voanjo, mangahazo,…, amin’ny alina a été récupéré chez Newsmada.
Hampandany ny kandidà Rajoelina ny fikambanan’ireo miaramila sy zandary misotro ronono (AAM). « Isaorana ireo miaramila sy zandary ato amin’ny fikambanantsika nanatanteraka ny adidy napetraka tamin’izy ireo, ary ny fitokisana nasehonareo eo amin’ny fanohanana ny kandidà Rajoelina ; ka nahatafiditra azy eo amin’ny laharana voalohany » hoy ny filohany, Randrianasimanana Jean Solo, tetsy Andrefan’Ambohijanahary, afakomaly. Notsiahiviny fa efa nifanome tanana ho amin’ny fampandaniana ny kandidà laharana faha-13 izy ireo ary mbola naneho ny fahavononany indray amin’ny fihodinana faharoa. Nanterin’ny AAM fa anisan’ny naharesy lahatra azy ireo ny vina IEM. « Fandaharanasa hany tokana afaka hamoaka antsika sy ny firenena ao anatin’izao fahantrana lalina izao. Koa mbola manentana sy manamafy ny amin’ny fanohanana ny kandidà Rajoelina hatrany ny AAM mba hanatanterahana ny vina ho fampandrosoana an’i Madagasikara », hoy ihany ny filohan’ny AAM.Randria L’article Hiara-dia amin’ny « N°13 » ny miramila misotro ronono a été récupéré chez Newsmada.
Asa soratra :: Hivoaka ny “Tsoakahitra”, bokin’i Fanja Razah
Sombin-tantara nandrombaka ny loka voalohany tamin’ny fifaninanana “Loka Nirhy Lanto, Rindrambolana sy koloteny 2016” ny boky “Tsoakahitra” nosoratan’i Fanja Razah izay havoakany. Mahatratra fito amby enim-polo ny pejy ao anatiny. Miisa enina ny sombin-tantara mandrafitra azy, ahitana ny “Diarin’i Vero”, “Lampivato nanasan-dandy”, “Ivohitsoa”, “Sodifafana”, “Vintana inona” ary ny “Ambohijanaka”. Nalisoa Ravalitera, mpanoratra, mpikabary, mampianatra mpikaroka ary mpikambana mahefa ao amin’ny Akademia Malagasy kosa no nanao ny teny fanolorana. Miresaka lohahevitra samihafa ny boky Ny “Diarin’i Vero”, ohatra, dia mitantara fianakaviana iray miaina anatina filaminana sy firindrana eo amin’ny lafiny maro. Tao ambadik’izay rindra sy lamina izay anefa, nisoko miadana ny fanararaotana mamoafady nataon’ny raim-pianakaviana ka nitera-doza teo amin’ilay tokantrano. Ny “Vintana inona” indray dia maneho zazavavy niaina tany ambanivolo, saingy voatery nakarina an-drenivohitra rehefa niara-maty vokatry ny fitsaram-bahoaka ireo ray aman-dreniny satria voasoketan’ny mpiara-monina ho mpanao ambalavelona. Nandritra ny fotoana fohy niainan’io zazavavy io tao an-drenivohitra no saika nihatra taminy avokoa na ny fanolanana na ny fanosehana hivaro-tena. Noho ny fitahian’ Andriamanitra anefa dia avotra hatrany izy. Tonga relijiozy izy rehefa lehibe. L’article Asa soratra :: Hivoaka ny “Tsoakahitra”, bokin’i Fanja Razah est apparu en premier sur AoRaha.
« JIOI » – Volley ball: hiatrika lalao firahalahiana voalohany ny ekipa malagasy
Mitohy tsy ankiato ny fanomanantena ho an’ireo mpilalao mandrafitra ny ekipam-pirenena malagasy, taranja volley ball, hiatrika ny “Lalaon’ny Nosy”, hatao any Maorisy. Hiatrika ny lalao firahalahiana voalohany izy ireo, ny asabotsy ho avy izao, ao amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina. Hotontosaina, manomboka amin’ny 3 ora hariva, izany ho an’ny ekipam-pirenena vehivavy raha amin’ny 5 ora hariva kosa ho an’ny lehilahy. Ho hentitra amin’ny fanamafisana ny teknika eny ambony kianja ny mpanazatra sy ny manampahaizana vahiny. Miara-miisalahy amin’ny fanomanana, i Jean Michel Rocher.Eo am-piandrasana izany, toy izao ny fandaharan-dalao amin’ny asabotsy izao : amin’ny 3ora – 5 ora hariva : ekipam-pirenena vehivavy VS Reste du monde; amin’ny 5 ora – 7 ora hariva : ekipam-pirenena lehilahy VS Reste du monde.Mi.RazL’article « JIOI » – Volley ball: hiatrika lalao firahalahiana voalohany ny ekipa malagasy a été récupéré chez Newsmada.
Fiarovana zavaboahary: vitsy ny vehivavy malagasy mandalina taranja siantifika
Ilaina ny mianatra sy mandalina taranja siantifika, indrindra fa eto Madagasikara, manana zavaboahary isan-karazany sy iatrehana izao fiovan’ny toetr’andro izao. Manazava ny fikambanana “Ikala Stem”.Mbola vitsy ny vehivavy, ny 30 % monja, mandalina taranja siantifika (Stem)*, na hita ho efa misondrotra aza izany eto Madagasikara. Izay no nampisy ny fikambanana Ikala Stem tamin’ny taona 2016, hanome vahana sy handrisika ny vehivavy malagasy, indrindra ny tovovavy, hirona any amin’ny siansa, teknolojia sy matematika.Nanomboka ny taona 2017, manao atrikasa io fikambanana io nomena ny anarana « Ikala Stem Annual Workshop” (IAW) ifantohana amin’ireo taranja voalaza ireo. Natao izany handresn-dahatra ny tovovavy manomboka any amin’ny ambaratonga faharoa. Notohanan’ny fikambanana Lemur Love any Etazonia ny “IAW 2019”, natao ny volana jona lasa teo. Lohahevitra tamin’izany ny “Handraisana an-tanana ny hoavy”, ao anatin’ny fiarovana ny zavaboahary, niainga avy amin’ny fanadihadiana natao momba ny gidro, ny fampandrosoana maharitra ary ny fandraharahana.Nandritra izany atrikasa izany ny nizaran’ireo solontena avy amin’ny fikambanana samy hafa (Conservation International, Asity Madagascar, minisiteran’ny Tontolo iainana, NextA, WWF …) ny lalana sy ny traikefa nodiavin’izy ireo, nanazavana ny mampiavaka ny asan’izy ireo. «Fantatra maneran-tany i Madagasikara noho ny fananany ireo zavaboahary mampiavaka azy, koa tolotrasa iray lehibe ny fiarovana azy ireo. Koa fotoana izao hampirisihana ny tovovavy hankafy ny taranja siantifika. Tombontsoan’ny fikambanana manampy sy manoro lalana azy ireo amin’ny safidiny sy amin’ny asany”, hoy ny sekreteran’ny Ikala Stem, ny Dr Andriantsaralaza Seheno.Nanohana ny fikambanana tamin’io atrikasa io ny WWF, resy lahatra amin’ny fahamaroan’ny olona tokony handalina ny siansa manoloana izao filàna fiarovana ny zavaboahary sy ny fiovan’ny toetr’andro izao. R.Mathieu Loharanom-baovao : WWFStem* : Sciences, technologies, ingénierie et mathématiquesL’article Fiarovana zavaboahary: vitsy ny vehivavy malagasy mandalina taranja siantifika a été récupéré chez Newsmada.
Halatra sakafo :: Nisy nanodina ny vary mora telo taonina
Tra-tehaky ny Zandarimaria tany Beloha-Androy, tao amin’ny tranon’ny lehilahy iray, ny vary mora enimpolo gony, tamin’ny sabotsy lasa teo. Tompon’andraikitra mitantana ny vary mora ihany io lehilahy io, araka ny loharanom- baovao. Avy nalaina an-tsokosoko tao amin’ny trano fitobian’ireo vary mora ny entana tamin’ny alin’ny zoma 21 jona, araka ny fitantaran’ireo akaiky ny mpanao famotorana. “Nahazo loharanom-baovao izahay ny amin’ny fisian’ny vary mora mivoaka an-tsokosoko tao amin’ny fitobiany. Rehefa natao ny fisavana ny tranon’ny lehilahy iray, isan’ireo mpiandraikitra ny fivarotana ireo vary mora, dia hita tao ireo vary tamin’ny gony. Nosamborina io lehilahy io ary mbola atao famotorana hatramin’izao”, hoy ny zandary any an-toe­rana. L’article Halatra sakafo :: Nisy nanodina ny vary mora telo taonina est apparu en premier sur AoRaha.